HGH ဖူးခက် - ဆေးထိုး HGH, Genotropin IU သည်၏ထောက်ခံချက်များသောက်သုံးသောအဘို့အချိန်
1. နံနကျအခြိနျသို့မဟုတ်ညဦးယံ၌ HGH ဆေးထိုးလုပ်ရမလား?
3. ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအဘို့အ HGH ၏အကြံပြုချက်များသောက်သုံးသော
HGH ဈ Makeနံနကျအခြိနျသို့မဟုတ်ညဦးယံ၌ njection?
HGH ထိုး၏အဓိကအချက်လူ့ကြီးထွားမြင့်မားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဖြစ်တယ် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟော်မုန်း။ ဒါဟာနံနက်ယံ၌သို့မဟုတ်ညဦးယံ၌ဆေးထိုးပေးဖို့အရေးမပါဘူး, အဓိကအရာလာမည့်ဆေးထိုးမတိုင်မီ 24 နာရီအတွင်းထိုသို့ပြုမှဖြစ်ပါသည်
အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးအချည်းနှီးသောအစာအိမ်အပေါ်? ကျွန်ုပ်တို့၏အစားအစာကိုသင်အစာစားပြီးနောက်တစ်ဦးဆေးထိုးပေးလျှင်, သင်၏အင်ဆူလင်အားဖြင့်သိသိသာသာကြီးထွားဟော်မုန်းဆေးထိုး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချ, သကြားကိုဖြိုဘို့တက်ကြွဖြစ်လာ, သကြားများပါဝင်သည်
မှန်ကန်စွာတစ်ဦးအချည်းနှီးသောအစာအိမ်တခုတခုအပေါ်မှာဆေးထိုးမအစာစားခြင်းမပြုမီဆေးထိုးပြီးနောက်2နာရီစောင့်ဆိုင်း
ဒါဟာ (အလေ့အကျင့်ပြပွဲနှင့်အမျှအများအပြားအစိတ်အပိုင်းများထဲသို့နေ့စဉ်သောက်သုံးသောခွဲဝေတစ်နေ့လျှင်2ဆေးထိုးကဲ့သို့တူညီသောရလဒ်ပေးသည်) အိပ်ရာဝင်ချိန်မတိုင်မီပြီးခဲ့သည့်မုန့်ညက် 1 နာရီညစာစားပြီးနောက်တစ်ဦးအချည်းနှီးသောအစာအိမ်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်သို့မဟုတ်ပြီးနောက်မနက်စာမတိုင်မီနံနက်ယံ၌ဆေးထိုးလုပ်ဖို့ သာ. ကောင်း၏
HGH ၏အကြံပြုချက်များသောက်သုံးသော ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအဘို့အ
2-0.6 ကီလိုဂရမ်ကနေအလေးချိန်ဟောင်းအမျိုးသမီးတွေ 25-35 နှစ်ပေါင်း 40 IU သည် (70 မီလီဂရမ်)
3 နှစ်ရှိပြီအလေးချိန် 0.9 ကီလိုဂရမ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို၏မိန်းမတို့အဘို့ 35 IU သည် (50 မီလီဂရမ်)
ယောက်ျား 2-0.6 နှစ်ပေါင်း 25 IU သည် (30 မီလီဂရမ်) အဟောင်းအလေးချိန် 80-100 ကီလိုဂရမ်
3-0.9 ကီလိုဂရမ်ကနေအလေးချိန် 30 နှစ်ပေါင်းအသက်ကြီးများအတွက် 80 IU သည် (120 မီလီဂရမ်)
အပြည့်အဝသင်တန်းသင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေကို၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏ပြီးပြည့်စုံသောရလဒ်ဖြည့်စွက်ရန်6လကြာပါသည်! တနင်္လာနေ့ HGH6ရက်ပေါင်းတစ်ပါတ်ကိုယူ - စနေနေ့ (တနင်္ဂနွေခေတ္တနား)6အစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲခြား2တစ်လသင်တန်း -3လအတွင်းထို့နောက်ထို့နောက်6ရက်ပေါင်းတစ်ပါတ်တစ်ဦးခေတ္တနား 30 ရက်ကိုတဖန်3လအတွင်း6ရက်ပေါင်းတစ်ပါတ်။
အတွက် Filed: ဆေးထိုး HGH ဘို့အချိန်
ယခင်ဆောင်းပါး လူ့ကြီးထွားမှုဟော်မုန်းထိုးပြီးနောက်အရေပြားအစာအိမ်တွင် HGH အနာ - အဖြေ။
next ကိုဆောင်းပါး HGH ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ကိုယ်အလေးချိန် | ဘန်ကောက်မြို့ဆုံးရှုံးအဆီအဘို့အ Genotropin ကိုသုံးပါ